နောက်ကျောလူကြိုက်များတဲ့တောင်းဆိုမှု - အစားအစာစွဲသုတေသနသုတေသန (2015) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
နောက်ကျောတွင်လူကြိုက်များသောဝယ်လိုအား by: အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုသုတေသနများ၏သမိုင်းအပေါ်တစ်ဦးက Narrative သုံးသပ်ချက် (2015)
ယေးလ် J ကို Biol Med ။ 2015 စက်တင်ဘာ; 88 (3): 295-302 ။
2015 စက်တင်ဘာ3အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အစားအသောက်စွဲလမ်း၏အယူအဆ ပို. ပို. လူကြိုက်များရယူလိုက်သည်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်သောဥစ်စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့, High-ကယ်လိုရီအစားအစာကျော်အကြားသိသာမျဉ်းပြိုင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒီဆှေးနှေးခ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု "hyperpalatable" အစားအစာများကြောင့်အချို့သောအာဟာရဒါမှမဟုတ်ဒါ့အပြင်ကြောင့်တိုးမြှင့်အာနိသင်တစ်ခုစွဲလမ်းအလားအလာရှိစေခြင်းငှါပါဝင်သည်။ ဒီစိတ်ကူးအတော်လေးသစ်ကိုဖြစ်ဟန်ပေမယ့်, အစားအစာစွဲအပေါ်သုတေသနပြုအမှန်တကယ်မကြာခဏအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရဖြစ်နေဆဲတဲ့တကယ်တော့အများအပြားဆယ်စုနှစ်လွှမ်းခြုံ။ ဟူသောဝေါဟာရကို၏သိပ္ပံနည်းကျအသုံးပြုမှု စှဲမွဲမှု ချောကလက်မှရည်ညွှန်းပင်ပြန် 19th ရာစုမှစတငျ။ အဆိုပါ 20th ရာစုတှငျအစားအသောက်စွဲလမ်းသုတေသန anorexia nervosa, bulimia nervosa, အဝလွန်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်မူးရူးအစာစားခြင်းရောဂါအပေါ် foci ပြောင်းလဲနေတဲ့ပါဝင်သည်ရာအများအပြားပါရာဒိုင်းအဆိုင်း, ခံယူ။ ထို့ကြောင့်ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်အစားအသောက်စွဲလမ်းသုတေသန၏အနုပညာသမိုင်းတွင်နှင့်ပြည်နယ်ဖော်ပြရန်နှင့်အဓိပ္ပာယ်များနှင့်နည်းစနစ်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သနျ့သရုပ်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
keywords: အစားအသောက်စွဲလမ်း, အဝလွန်ခြင်း, Bing စား, anorexia, bulimia, ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို, ချောကလက်
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အစားအသောက်စွဲလမ်း၏အယူအဆ ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ ဤအယူအဆအခြို့သောအစားအစာများ (များသောအားဖြင့်မြင့်မားလုပ်ငန်းများ၌အလွန်အရေးပါတယ်လို့များနှင့်မြင့်မားသောကယ်လိုရီအစားအစာများ) တစ်ခုစွဲလမ်းအလားအလာရှိသည်နှင့် Over အချို့ပုံစံများကိုတစ်ဦးစွဲအမူအကျင့်ကိုကိုယ်စားပြုမည်အကြောင်းစိတ်ကူးပါဝင်သည်။ ဤသည်တိုးမြှင့လူကြိုက်များ [မသာရောင်ပြန်ဟပ်မီဒီယာအစီရင်ခံစာများမြင့်မားသောအရေအတွက်နှင့်စာပေကို တင်. နေသည်1,2] ဒါပေမယ့်လည်းသိပ္ပံနည်းကျစာပေအရေအတွက်က (တစ်ဦးသိသိသာသာတိုးအတွက်ပုံ 1) [3,4] ။ "သိပ္ပံပညာတစ်ရပ်တည်းဖြတ်စာအုပ်မျက်ခြေမပြတ်သည်အဘယ်မှာရှိအမှတ်တစ်ဦးဝေဖန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်" ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 2012 ခုနှစ်တွင်ဥပမာ, အစားအစာနှင့်စွဲအပေါ်တစ်ဦးပြည့်စုံလက်စွဲစာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့  ။ ဤသည်တိုးမြှင့်အကျိုးစီးပွားအစားအသောက်စွဲလမ်း၏စိတ်ကူးမှသာရှိသောကြောင့်အလွန်အမင်းလုပ်ငန်းများ၌အစားအစာများ၏တိုးပွားလာရရှိနိုင်မှုနှင့်အစားအသောက်စွဲလမ်း၏အယူအဆအဝလွန်ခြင်း၏တိုးမြှင့်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်တီထွင်သော 21st ရာစုအတွင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လာခဲ့သည်သောအထင်အမြင်ဖန်တီးပုံ  ။ တချို့ကသုတေသီများပင် [ဤရာစုအတွင်းထုတ်ဝေခဲ့ဆောင်းပါးများကိုကိုးကားခြင်းဖြင့်အစာအာဟာရစွဲသုတေသနအတွက်စွပ်စွဲချက်ရှေ့ဆောငျလုပျရညျညှနျး7,8].
ယခုနှစ 1990-2014 အတွက်အစားအသောက်စွဲလမ်းအပေါ်သိပ္ပံနည်းကျစာပေနံပါတ်။ တန်ဖိုးများကိုရှာဖွေရေးဝေါဟာရကို "အစာစွဲ" ကိုနှိပ်ပြီး "ခေါင်းစဉ်" သုံးပြီးသီးခြားစီနှစ်စဉ်ဘို့ကောက်ယူသိပ္ပံရှာဖွေရေးတစ်က်ဘ်ပေါ်တွင်အခြေခံ hits များ၏အရေအတွက်ကိုကိုယ်စားပြု ...
ဤစာတမ်းတစ်လျှောက်လုံးသရုပ်ပြပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့ပင်, အစားအစာစွဲမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဝေါဟာရနှင့်အဝလွန်ရောဂါရှင်းပြရသောသစ်တစ်ခုစိတ်ကူး, ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီအယူအဆ, မှား၏။ ထိုကွောငျ့, ဤဆောင်းပါးကိုအကျဉ်းချုပ်အစားအသောက်စွဲလမ်းသုတေသန၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတွေ့ရမယ်။ တစ်ခုမှာရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်သုတေသနတစ်ခုအတော်လေးသစ်ကိုလယ်ပြင်ဖြစ်သော်လည်းယင်း၏သမိုင်းကြောင်းပြသရန်ဖြစ်ပါသည်, အမှန်တကယ်အများအပြားဆယ်စုနှစ်လွှမ်းခြုံနှင့်အစားအစာနှင့်အစွဲအကြားအသင်းအဖွဲ့ပင်ပြန် 19th ရာစုမှစတငျ။ အဆိုပါ 20th ရာစုတှငျအစားအသောက်စွဲလမ်းတွေအကြောင်းအာရုံစိုက်၏ဒေသများနှင့်ထင်မြင်ချက်များ (ထိုကဲ့သို့သောစွဲနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့အဆိုပြုထားခဲ့အစားအစာများနှင့်အစာစားခြင်းမမှန်အမျိုးအစားများနှင့်တစ်ဦးစွဲရှုထောင့်ကနေအမူအကျင့်ကိုစားခြင်းအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သောနည်းလမ်းများအဖြစ်သည် dynamically ပြောင်းလဲသွားတယ်ပုံ 2) ။ လက်ရှိဆောင်းပါး, သို့သော်, ကျော်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားအမျိုးမျိုးသောဖြစ်စဉ်နှင့် neurobiological မျဉ်းပြိုင်ဖျောပွသို့မဟုတ်ကုသမှု, ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်အများပြည်သူမူဝါဒအများအတွက်အစားအစာစွဲအယူအဆ၏ဖြစ်နိုင်သောအကျိုးဆက်များနှင့်ဂယက်အကြောင်းကိုသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရည်ရွယ်မထားဘူး။ ဤအကိစ္စများအားလုံးသည်ကျယ်ပြန့် [တခြားနေရာကိုဆှေးနှေးခဲ့ကြ9-21] ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဆောင်းပါးမှာအစားအစာစွဲအယူအဆများ၏တရားဝင်မှုအကဲဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ်မထားဘူး။
နှောင်းပိုင်းတွင် 19th နှင့်စောစော 20th ရာစု: ပထမဦးစွာအစအဦး
အဆိုပါ Inebriety ၏ဂျာနယ် [ပထမဦးဆုံးစွဲလမ်းဂျာနယ်များထဲမှခဲ့ 1876 မှ 1914 ကနေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်22] ။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများဥပမာ (အလွန်အကျွံအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်, လေ့မူး, inebriety, ebriosity, dipsomania, narcomania, oinomania, အရက်, နှင့် စှဲမွဲမှု) ။ စိတ်ဝင်စားစရာဟူသောဝေါဟာရကို စှဲမွဲမှု အဆိုပါများတွင်အသုံးပြုအဖြစ် Inebriety ၏ဂျာနယ် အဓိကအားအရက်ထက်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်သို့မှီခိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးချောကလက်မှရည်ညွှန်းအတွက် 1890 ၌ထငျရှား  ။ ထို့နောက်အစားအစာများ "ကိုနှိုးဆွ" ၏စွဲလမ်းတဲ့သတ္တိလည်း [ဂျာနယ်တွင်၏အခြားကိစ္စများအတွက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ကြသည်17] ။ ဥပမာ, Clouston  သောအခါ "ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရှိအခါတိုင်းတစ်ဦးနှောက်အစားအသောက်များတွင်လှုံ့ဆော်အပေါ်မှီခိုခြင်းနှင့်ကုန်သည့်အခါယင်း၏ပွနျလညျထူထောငျဘို့စပျစ်ရည်သောက်ပြီ, တစ်ဦးပြင်းထန်သောနှင့်တွန်းလှန်တဏှာလည်းမရှိထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်သောက်စိတ်ကြွဆေးတက်သည်ထား၏။ " အဲဒီဖော်ပြထား
1932 ခုနှစ်, Mosche Wulff, psychoanalysis ၏ရှေ့ဆောင်တဦးတည်း, ဂြာမနျတွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေရာ၏ခေါင်းစဉ်ကို "တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ခံတွင်းရောဂါလက္ခဏာတွေ Complex နှင့်စွဲလမ်းမှုမှ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးတွင်" အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောစေခြင်းငှါ  ။ နောက်ပိုင်းတွင် Thorner  Wulff ယင်းလွမ်းဆွေးတစ်ဦးလွန်စွာမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ထဲမှာထည့်သွင်းနေစဉ်အစားအစာစှဲလမျးသူရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးလိင်အင်္ဂါဆက်ဆံရေးအရပျ၌ခေါ်ဆောင်သွား introjects insofar အဖြစ်အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပါးစပ်အချက်နှင့်အတူသူသည်အစားအသောက်စွဲလမ်းခေါ်ဆိုရသောကျော်ဆက်သွယ်နှင့် melancholia ကနေခွဲခြားက "ဖျော, ဒီအလုပ်ရည်ညွှန်း နှင့်အဖျက်ထုံးစံ။ "ကျော်ပေါ်မှာဤ psychoanalytical ရှုထောင့်ဆက်ဆက်ခေတ်မမီတော့သည်နှင့်ယနေ့ခေတ်အဲဒီအချက်ဟာပုံပေါ်နေစဉ်, ကစွဲလမ်းအဖြစ်ကျော်ဖော်ပြ၏စိတ်ကူးထားပြီး 1930s အတွက် existent ခဲ့ကွောငျးကြည့်ဖို့မည်သို့ပင်ဆိုစေထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
1950s: အ Term '' စားနပ်ရိက္ခာစွဲ '' ၏ဒင်္ဂါးပြား
ဝေါဟာရ အစားအသောက်စွဲလမ်း ပထမဦးဆုံးအ 1956 အတွက် Theron Randolph အားဖြင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာစာပေမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်  ။ သူအဖြစ်ကဖော်ပြထား "ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်အခြားစွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များ၏သူတို့အား Description အလားတူရောဂါလက္ခဏာတွေတစ်ဘုံပုံစံထုတ်လုပ် [ဖြစ်သော] အလွန်အမင်းထိခိုက်မခံသောအရာမှတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမှန်မှန်စားသုံးတဲ့အစားအစာတိကျတဲ့လိုက်လျောညီထွေ။ " သူကလည်း, သို့သော်, မှတ်ချက်ပြုအများဆုံးက " မကြာခဏပါဝင်ပတ်သက်ပြောင်းဖူး, ဂျုံ, ကော်ဖီနို့, ကြက်ဥ, အာလူးနှင့်အခြားမကြာခဏစားရအစားအစာများဖြစ်ကြသည်။ "မွငျ့မားသကြားနှင့် / သို့မဟုတ်အဆီအကြောင်းအရာနှင့်ယနေ့ခေတ်အလွန်အမင်းလုပ်ငန်းများ၌အစားအစာအလားအလာစွဲလမ်းအဖြစ်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်အဖြစ်ဒီအမြင်ပြောင်းလဲသွားပြီ .
Randolph ဤအချိန်လောက်ဟူသောဝေါဟာရကိုအစားအသောက်စွဲသုံးပြီးတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ 1959 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ဆီးချိုရောဂါ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အခန်းကဏ္ဍကိုန်းကျင် revolved တဲ့ panel ကဆွေးနွေးမှု [အစီရင်ခံခဲ့သည်28] ။ ဒီဆွေးနွေးမှုအတွင်းမှာတော့အဲလ်ဘတ်ဂျေ Stunkard (1922-2014)  သူပထမဦးဆုံးရောဂါ (BED) စာစားမူးရူးဖော်ပြထားသည့်အတွက်အဘယ်သူ၏ဆောင်းပါးတစ်စိတ်ရောဂါထိုနှစ်များတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်  တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ, မေးမြန်းတော်မူလျှင်ခဲ့ပါတယ် "ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ရအသုံးအများဆုံးနှင့်ခက်ခဲပြဿနာများကိုတစ်ခုမှာနှစ်ဦးစလုံးဆီးချိုရောဂါနှင့်၎င်း၏ကုသမှု၏ကမ်ဘာဦးအတွက်, အစားအသောက်စွဲလမ်း၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီယန္တရားထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်အဲဒီမှာဇီဝကမ္မအချက်များဖြစ်ကြသည်သို့မဟုတ်ကအားလုံးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါသလဲ မူးယစ်ဆေးဝါးမှအရက်စွဲခြင်းနှင့်စွဲရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းဘာလဲ? " ။ Stunkard သူဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုအစားအသောက်စွဲလမ်းသည်ဟုမထင်ထားဘူးကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည် "ကျနော်တို့အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးမှစွဲလမ်းအကြောင်းကိုသိ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တရားမျှတသည်။ " သို့သော်ဘာပစ္စုပ္ပန်ဆောင်းပါးအတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲပိုမိုအရေးပါသည်ကိုသူလည်းဖော်ပြထားကြောင်း သက်တမ်းအစားအသောက်စွဲလမ်းထပ်မံအစားအသောက်စွဲလမ်း၏စိတ်ကူးအဖြစ်စောစော 1950s အဖြစ်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အထွေထွေအများပြည်သူအကြားလူသိများခဲ့ကြောင်းထောက်ခံပါတယ်သောအသုံးများဖြစ်ပါတယ်။
1960s နှင့် 1970s: Overeaters အမည်မသိနှင့်ရံဖန်ရံခါပြောဆို
Overeaters အမည်မသိ (oa), အရက်အမည်မသိ၏ 12-ခြေလှမ်းအစီအစဉ်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး Self-အကူအညီနဲ့အဖွဲ့အစည်း 1960 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် oa ကျော်တစ်ဦးစွဲမူဘောင်ကိုထောက်ခံအားပေးနှင့်အုပ်စု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဖော်ထုတ်စွဲလမ်းသောဥစ်စာ (ဆိုလိုသည်မှာအချို့သောအစားအစာများ) ကို အသုံးပြု. ကြဉ်ရှောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ [Little ကသုတေသနဖြစ်တည်မှု၎င်း၏ထက်ပို 50 နှစ်များတွင် oa အပေါ်ကောက်ယူခဲ့ပြီး, နှင့်သင်တန်းသားများကို oa သူတို့ကိုထောကျအကူပွုကွောငျးကိုသဘောတူပေမဲ့, oa "အလုပ်လုပ်တယ်" ဘယ်လိုနှင့် ပတ်သက်. မပါသဘောတူညီမှုလည်းမရှိ31,32] ။ အလားတူ Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုများနောက်တော်သို့လိုက်သောဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်မည်သို့ပင်ဆိုစေ oa [, ကျော်တခုတခုအပေါ်မှာစွဲလမ်းရှုထောင့်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသော Self-အကူအညီနဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမတည်မနေမယ်လို့17].
အစားအသောက်စွဲလမ်း၏အယူအဆအပေါ်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနသို့သော် 1960s နှင့် 1970s အတွက်နီးပါး Non-တည်ရှိခဲ့ပေမယ့်အချို့သုတေသီများရံဖန်ရံခါသူတို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေအတွက်အသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အစားအသောက်စွဲလမ်း [သည့် 1960s အတွက်ဘဲလ်အားဖြင့်နှစ်ခုစာတမ်းများအခြားပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပြဿနာများနှင့်အတူဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည်33,34] နှင့် 1966 အတွက်အစားအစာဓာတ်မတည်နှင့် otitis မီဒီယာများ၏အခြေအနေတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည်  ။ 1970 ခုနှစ်, Swanson နှင့် Dinello [အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ပြီးနောက်ပြန်လည်အလေးချိန်မြင့်မားမှုနှုန်း၏အခြေအနေတွင်အစားအသောက်စွဲလမ်းရည်ညွှန်း36] ။ စနစ်တကျ 1960s နှင့် 1970s အတွက်အစားအစာစွဲလမ်း၏အယူအဆစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်မကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှိခဲ့ပေမယ့်ကောက်ချက်ချရန်, ပြုလုပ်ထားပြီးကျော်လျှော့ချ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူ Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုများအသုံးပြုသောနှင့်သို့မဟုတ်ပင်တစ်ဦးအဖြစ်များ၏အခြေအနေတွင်သိပ္ပံနည်းကျဆောင်းပါးများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် အဝလွန်မှုအတွက်တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym ။
1980s: Anorexia နှင့် Bulimia Nervosa အပေါ်အာရုံစိုက်
အဆိုပါ 1980s ခုနှစ်တွင်အချို့သုတေသီများ [တစ်ခုစွဲလမ်းအပြုအမူ (သို့မဟုတ် "ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှီခို") အဖြစ် anorexia nervosa (AN) နဲ့တဦးချင်းစီအားဖြင့်ပြသအစားအစာကန့်သတ်ဖော်ပြရန်ကြိုးစားခဲ့37] ။ ဥပမာအားဖြင့်, Szmukler နှင့် Tantam  AN နှင့်အတူလူနာငတ်မွတ်ခေါင်းပါး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုအပေါ်မူတည်များမှာ "အဲဒီစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်အစားအစာ သာ. ကြီးကန့်သတ်လိုအပ်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးဖို့သည်းခံစိတ်ထံမှကိုယ်အလေးချိန်ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်း, အစာစားခြင်းအပေါ်မနှစ်မြို့ဖွယ် '' ဆုတ်ခွာ '' ရောဂါလက္ခဏာများ၏နောက်ပိုင်းတွင်ဖှံ့ဖွိုးတိုး။ "ဒီစိတ်ကူးအကြာတွင် AN အတွက် endogenous opioid စနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအားဖြင့် facilitated ခဲ့သည် [39,40] ။ မှတ်စု၏, သို့သော်, နဲ့အတူ Endorphins ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းအကြောင်း, အဝလွန်ခြင်း [ဖြစ်ပါသည်, ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်41,42] ။ အလားတူပင်အဝလွန်ခြင်း [အဝလွန်ပုဂ္ဂိုလ်များ "အရာဝတ္ထုကိုယ်စားပြုမှု" ၏သူတို့ရဲ့အဆင့်တွင်ပုံမှန်-အလေးချိန်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်ရသော 1989 ထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခုအတွက်အစားအသောက်စွဲလမ်းမူဘောင်အောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်43].
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစိတ်ပညာ၏လယ်ပြင်ကနေအစပြုသည့်စွဲလမ်းရှုထောင့်ကနေ bulimia nervosa (BN) အပေါ်အချို့သောလေ့လာမှုတွေလည်းရှိခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ [အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်စွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုအတိုင်းအတာအပေါ်မြင့်မားသောရမှတ်အစီရင်ခံရသော 1979 ကနေနှစ်ခုဆောင်းပါးများ, ဖွငျ့ preluded ခဲ့ကြသည်44] ပေမယ့်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့နှိုင်းယှဉ်ပါကလာဖို့နဲ့အဝလွန်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အနိမ့်ရမှတ်  ။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့် bulimic လူနာအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများကိုလည်းအုပ်စုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုရှာဖွေတာအချို့သောလေ့လာမှုတွေကိုဖြတ်ပြီးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအစီအမံအပေါ်အလားတူရမှတ်များရှာဖွေတာအချို့သောလေ့လာမှုများနှင့်အတူကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိချက်ထုတ်လုပ် [46-49] ။ BN အတွက်စွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ်ဤအကြောင်းလေ့လာမှုများ [ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု BN ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးဝင်သောဥပစာဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည့်အတွက်တစ်ဦးအမှုလေ့လာမှုအားဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြသည်50] နှငျ့ "Foodaholics Group မှကုသမှုအစီအစဉ်" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို .
1990s: Chocoholics နှင့်ဝေဖန်မှတ်ချက်
တစ်ခုစွဲအဖြစ်မမှန်စားသုံးခြင်းကိုဖော်ပြရန်ဤပထမဦးဆုံးကြိုးစားမှုပြီးနောက်မမှန်စားသုံးခြင်း၏စွဲမော်ဒယ်ပြင်းထန်စွာ, အယူအဆရေးရာဇီဝကမ္မနှင့်အခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားအပေါ်အခြေခံပြီးဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည့်အတွက် 1990s နှင့် 2000 ထုတ်ဝေအချို့သောပြည့်စုံသုံးသပ်ချက်များ, [ရှိခဲ့သည်52-55] ။ သို့သျောလညျး [အစာစားခြင်းမမှန်သို့မဟုတ်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်နှစ်ခုအတွက်အနည်းငယ်ဆောင်းပါးများကို၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ56,57] နှင့်စွဲတူသောမုန္လာဥနီစားသုံးမှုပုံမှန်မဟုတ်သောရောဂါဖြစ်ပွားမှုအစီရင်ခံခဲ့ပြီးသောနှစ်ခု [58,59] အသစ်တခုသုတေသနအာရုံစိုက်ပေါ်ထွက်လာကြသလိုပဲ: ချောကလက်။
ချောကလက်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအကြား, အနောကျပိုငျးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အစားအစာအများဆုံးမကြာခဏအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါတယ် [60,61] နှင့်လူအများဆုံးမကြာခဏစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်သောအစားအစာ [27,62] ။ ဒါဟာပြီးသားချောကလက်က "hedonically စံပြပစ္စည်းဥစ္စာ" ကိုမြင့်မားတဲ့ဆီဥနှင့်မြင့်မားသောသကြားအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါင်းစပ် [ရှိကြောင်း 1989 အတွက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်63] - အချို့သော 25 နှစ်ကြာပြီးနောက် "hyperpalatable" စွဲလမ်းအစားအစာများနှင့် ပတ်သက်. ထင်မြင်ချက်ပေးရန်အလားတူဖြစ်သောစိတ်ကူးတစ်ခု [3,27] ။ ချောကလက်ရဲ့ macronutrient ဖွဲ့စည်းမှုအပြင်, ထိုကဲ့သို့သောဖိန်းဓာတ်နှင့် theobromine အဖြစ်က၎င်း၏အာရုံခံဂုဏ်သတ္တိများသို့မဟုတ် psychoactive ပါဝင်ပစ္စည်းများကဲ့သို့အခြားအချက်များလည်း [ချောကလက်၏စွဲလမ်းကဲ့သို့သောသဘာဝမှမျှဝေသူအဖြစ်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်64,65] ။ သို့သော်ချောကလက်၏ xanthine-based သက်ရောက်မှု [ချောကလက်သို့မဟုတ်ယင်း၏စွဲတူသောစားသုံးမှုများအတွက် like နှိပ်ရှင်းပြဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်တွေ့ပါပြီ61].
အနည်းငယ်လေ့လာမှုများဒါခေါ် "chocoholics" သို့မဟုတ် "ချောကလက်စွဲ" စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြရသောကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုမှာ [အခြားအ variable တွေကိုအကြားတစ်ဦးဖော်ပြရန်လေ့လာမှုအစီရင်ခံတဏှာနှင့်စားသုံးမှုပုံစံခဲ့66]; အခြားတဦးတည်း [ "ချောကလက်စွဲ" နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားအလားတူအစီအမံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ67]; တလေ့လာမှု [ချောကလက်ထိတွေ့ခြင်းမှပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ68] ။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏အဓိကချို့ယွင်းချက် "ချောကလက်စွဲ" status ကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်တရားဝင်မှုမှအားနည်းချက်သည်နှင့်အများဆုံး nonprofessional သင်တန်းသားများကိုစွဲလမ်းတဲ့တိကျသောအဓိပ်ပါယျမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသော Self-ဖော်ထုတ်ခြင်း, အပေါ်အခြေခံပြီးခံခဲ့ရကြောင်း, သို့သော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့နှစ်ဦးလေ့လာမှုများကအခြားတ္ထုများနှင့်အပြုအမူဖို့ "ချောကလက်စွဲလမ်း" နှင့်စွဲအကြားအသင်းအဖွဲ့များဆန်းစစ်နှင့်အပြုသဘောတွေ့ရှိရပေမယ့်အလွန်သေးငယ်တဲ့ဆက်ဆံရေး [69,70].
2000s: တိရိစ္ဆာန် & Models နှင့် Neuroimaging
oa တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2000 နှစ်ပေါင်း - - အစောပိုင်း 40s အတွက်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု [တဲ့ 12-Step program နဲ့ bulimic နှင့်အဝလွန်လူနာကုသမှုအစီရင်ခံခဲ့သည့်အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်71] ။ ဒီကုထုံးချဉ်းကပ်မှုအပြင်, သို့သော်, ဒီဆယ်စုနှစ်များ၏အာရုံပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုရာမှတွေ့ရှိချက်များကို Parallel စေခြင်းငှါကျော်နှင့်အဝလွန်ခြင်းအခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများများ၏စာမေးပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ လူသားများတွင်ဤအာရုံကြောယန္တရားများအဓိကအား positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်များကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဝမ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသဲဆောင်းပါး  အောက်ပိုင်း striatal dopamine D ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ2 စာရေးသူပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမှာတွေ့ရှိထားသည်အရာကိုဆင်တူတဲ့ "ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ" ၏တစ်ဦး Correlate အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူထားတဲ့ထိန်းချုပ်မှု, နှိုင်းယှဉ်ပါကအဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အဲဒီ receptor ရရှိမှု [73,74] ။ တခြားလေ့လာမှုဥပမာ, အလားတူဦးနှောက်ဧရိယာများက high-ကယ်လိုရီအစားအစာလှုံ့ဆော်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်မှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်-ဆက်စပ်အတွက် BN နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် BED ပြပွဲပိုမိုမြင့်မား activation တွေ့ရှိခဲ့ရသောအစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာ၏အတှေ့အကွုံမြားနှငျ့လေ့လာမှုများစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ ကိုယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနဲ့တူထိန်းချုပ်မှု, နှိုင်းယှဉ်ပါကဦးနှောက်ဧရိယာများ [ဥစ္စာ-related တွေကိုတုန့်ပြန်ပိုမိုမြင့်မားဆုလာဘ်-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုပြသ75,76].
ဒီဆယ်စုနှစ်ထဲမှာအစားအသောက်စွဲလမ်းသုတေသနနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့လိုင်းကြွက်မော်ဒယ်များဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအ Paradigm ၏တဦးတည်းအတွက်, ကြွက်အစားအစာ 12 နာရီနေ့စဉ်ဆုံးရှုံးပြီးနောက်သကြားဖြေရှင်းချက်ကိုနှစ်ဦးစလုံးမှ 12 နာရီ access ကိုပေးသည်နှင့် Chow ကြသည်  ။ ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာဘို့သကြားနဲ့ Chow မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်း၏ဤအချိန်ဇယားကိုခံယူသူကိုကြွက်သကြားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောဆုတ်ခွာအဖြစ်စွဲလမ်း၏အမူအကျင့်လက္ခဏာများပြတွေ့ရှိ, သူတို့သည်လည်း [neurochemical အပြောင်းအလဲများပြသခဲ့ကြသည်77,78] ။ တခြားလေ့လာမှုတစ်ခုက high-ကယ်လိုရီ "ကော်ဖီဆိုင်" နဲ့ထောက်ပံ့ပေးကြွက်အစားအသောက်များတွင် striatal dopamine D ကိုတစ် downregulation ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သောအလေးချိန်, ရရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ2 receptors နှင့်ဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာဆက်လက်စားသုံးမှု  ။ ကောက်ချက်ချရန်ဤလေ့လာမှုများ [သကြားဓာတ်မြင့်မားတဲ့ပမာဏ၏စားသုံးမှုအမှန်ပင်ကြွက်များတွင်အမြတ်အလေးချိန်မြင့်မားအဆီစားသုံးမှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထဲမှာစွဲတူသောအပြုအမူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်စေခြင်းငှါအကြံပြု80] နှင့်ထပ်အာရုံကြောဆားကစ်ပု food- ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကိုနှင့်အသီးသီးအပြုအမူနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုစားသုံးခြင်း၏ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်ရှိကြ၏။
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်သုတေသီများပိုပြီးတိကျစွာအစားအသောက်စွဲလမ်းသတ်မှတ်နှင့်အကဲဖြတ်ရန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, Cassin နှင့်ဗွန် Ranson  ၏စတုတ္ထတည်းဖြတ်မူအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုစံတစ်ခုစနစ်တကျအင်တာဗျူးထဲမှာ "မူးရူးစား" နဲ့ "ပစ္စည်းဥစ္စာ" ကိုအစားထိုးညွှန်းဆို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM-IV) နှင့် BED နှင့်အတူသင်တန်းသားများ၏ 92 ရာခိုင်နှုန်းကပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုများအတွက်အပြည့်အဝစံတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်ချဉ်းကပ်နည်း [အဆိုပါ DSM-IV ရှိပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုများအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံပေါ်တွင်အခြေခံအစားအသောက်စွဲလမ်း၏ရောဂါလက္ခဏာများ၏အကဲဖြတ်များအတွက် Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအရှည်ဖြစ်သည့်ယေးလ်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုစကေး (YFAS) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခဲ့သည်82] ။ အစားအသောက်နှင့်စားရန်ရည်ညွှန်းပစ္စည်းများအားလုံးနှင့်အတူ DSM-IV တွင်ဖော်ပြထားအဖြစ်အထူးသ, အ YFAS ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုဘို့ခုနစျပါးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတိုင်းတာ: 1 ပိုကြီးတဲ့ပမာဏသာရှိသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ထက်ပိုရှည်ကာလအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုယူပြီး) (ဥပမာ "ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆက်ရှာတွေ့ ငါမရှိတော့ဆာလောင်မွတ်သိပ်မိပါတယ်သော်လည်းအချို့သောအစားအစာများကိုစားသုံးရန် ") ။ ; 2) ဇွဲအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ် (ဥပမာဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်မအောင်မြင်ကြိုးစားမှု, "အစားအစာအချို့အမျိုးအစားများကိုအစာစားခြင်းသို့မဟုတ်အစားအစာအချို့အမျိုးအစားများပေါ်ခုတ်ငါစိုးရိမ်အရာတစ်ခုခုသည်မဟုတ်။ "); 3) ငါအခြို့သောအစားအစာများကိုမရရှိနိုင်သောအခါ, သူတို့ကိုငါရရှိရန်ငါ၏အလမ်းထဲကသွားလိမ့်မည်ကွောငျးတှေ့ "ဥပမာ (ရယူသို့မဟုတ်သုံးပါသောပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်ယင်း၏သက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အချိန်အများကြီးဖြုန်း။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါစတိုးဆိုင်မှနှင်ထုတ်မည် ကျွန်မအိမ်မှာငါ့ထံသို့မရရှိနိုင်ပါကအခြားရွေးချယ်စရာရှိသော်လည်းအချို့သောအစားအစာများကိုဝယ်ယူ ") ။ 4) ဥပမာ, "ငါဒါမကြာခဏသို့မဟုတ်ငါသည်ငါ၏နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်း, အစားအစာအစားအလုပ်လုပ်စားရန်စတင်ခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောအမြောက်အမြားအတွက်အချို့သောအစားအစာများကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာကြိမ်ရှိခဲ့သည် (ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရန်အရေးကြီးပါသည်, လူမှုရေးလုပ်ငန်းခွင်, ဒါမှမဟုတ်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများတက်ပေးခြင်း မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်အခြားအရေးကြီးသောလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်ငါပျော်မွေ့အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင် ") ။ 5) ဥပမာ, "။ ငါစိတ်ခံစားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိခြင်းခံခဲ့ရသော်လည်းအစားအစာ၏တူညီသောအမျိုးအစားများသို့မဟုတ်အစားအစာ၏တူညီသောပမာဏကိုစားသုံးထားရှိမည်") (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိနေသော်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်; 6) သည်းခံစိတ် (ဥပမာ, "အချိန်ကျော်, ငါထိုကဲ့သို့သောလျှော့ချအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ပျော်မွေ့သကဲ့သို့ငါလိုချင်တဲ့ခံစားမှု, ရရှိရန် ပို. ပို. စားရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ "); နှင့် 7) ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေ (ဥပမာ, "ငါခုတ်လှဲသို့မဟုတ်အချို့သောအစားအစာများကိုစားခြင်းရပ်တန့်သောအခါငါထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှု, စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအဖြစ်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေရှိခဲ့ပါပြီ။ ") ။ နှစျဦးအပိုဆောင်းပစ္စည်းများကိုကျော်ကနေရရှိလာတဲ့ဆေးခန်းသိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းသို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်အကဲဖြတ်ရန်။ အဆိုပါ DSM-IV ဆင်တူ [အနည်းဆုံးသုံးလက္ခဏာတွေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလျှင်အစားအသောက်စွဲလမ်း "ရောဂါ" ရနိုင်နှင့်ဆေးခန်းသိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းသို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည်82,83].
အဆိုပါ YFAS တစ်အစားအသောက်စွဲလမ်း "ရောဂါ" နဲ့တစ်ဦးချင်းစီရောဂါဗေဒအစာစားခြင်း၏ Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာအထိမြောက်မြားစွာ variable တွေကိုအပေါ်တစ်ဦး "ရောဂါ" မပါဘဲသူတို့အထဲကနေမတူညီနိုင်ကိုပြသသောအတိတ်6နှစ်များတွင်လေ့လာမှုများတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်အလုပ်ထားပြီး , psychopathology, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော High-ကယ်လိုရီအစားအစာ-တွေကိုမှ dopaminergic အချက်ပြသို့မဟုတ်မော်တာတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ multilocus မျိုးရိုးဗီဇပရိုဖိုင်အဖြစ်ဇီဝကမ္မနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအစီအမံမှ Impulse  ။ အဆိုပါ YFAS စွဲလမ်းကဲ့သို့စား၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်အသုံးဝင်သော tool ကိုဖွစျဖို့သက်သေပြခဲ့ပေမဲ့ [က, သင်တန်း, မစုံလဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏တရားဝင်မှုမေးခွန်းထုတ်ထားသည်84] ။ ဥပမာ, BED နှင့်အတူအဝလွန်အရွယ်ရောက်ပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50 ရာခိုင်နှုန်း YFAS ရောဂါလက်ခံရရှိကြောင်းနှင့်ဤလူတစ်ဦးချင်းစီ [တဲ့ YFAS ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမခံမယူကြဘူးသူကို BED နှင့်အတူအဝလွန်လူကြီးများထက်ပိုမိုမြင့်မားစား-related နှင့်အထွေထွေ psychopathology ကိုပြသကြောင်းတွေ့ရှိထားသည်85,86] ။ ဤအတွေ့ရှိချက်များအလငျး၌ပြုလုပ် [သည့် YFAS နှင့်အတူတိုင်းတာအဖြစ်အစားအသောက်စွဲမျှသာ BED တစ်ဦးထက်ပိုသောပြင်းထန်ပုံစံကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါစောဒကတက်ထားသည်87,88] ။ ထို့ပြင်အစားအစာကိုစွဲမော်ဒယ်အချို့သုတေသီများပြင်းပြင်းထန်ထန်၎င်း၏တရားဝင်မှု supporting နဲ့အကြီးအကျယ်ငြင်းခုံခေါင်းစဉ်ဖြစ်ဆက်လက် [3,7,21,89-91], အခြားသူများအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသကြားအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အာဟာရ, အယူအဆရေးရာထည့်သွင်းစဉ်းစားနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များကို၏ကွဲပြားခြားနားသောဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးကဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်နေချိန်မှာ [84,92-97] ။ အများစုမှာမကြာသေးမီကပြုလုပ်တစ်ခုစွဲဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရစေခြင်းငှါအပြုအမူအစာစားတစျမြိုးရှိလျှင်ပင်အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောစွဲလမ်းအေးဂျင့်ရှိသည်အတိုင်း, ဟူသောဝေါဟာရကိုအစားအသောက်စွဲလမ်းမှားကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီနှင့်ဤသို့ပြုလုပ်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးအမူအကျင့်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည် စွဲလမ်း (ဆိုလိုသည်မှာ "အစာစားခြင်းစွဲလမ်း") .
အစားအသောက်စွဲလမ်းအပေါ်တိရိစ္ဆာန်သုတေသနအဖြစ်ကောင်းစွာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဒါကဥပမာ, အပြုအမူအစာစားခြင်းအပေါ်တိကျတဲ့အာဟာရအစိတ်အပိုင်းများ differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများတစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် (ဥပမာ, High-အဆီဓာတ်စာ, High-သကြားဓာတ်စာ, ပေါင်းစပ် High-ဆီဥနှင့်မြင့်မားသောသကြားဓာတ်စာ, ဒါမှမဟုတ် high-ပရိုတိန်းဓာတ်စာ) တို့ပါဝင်သည်နှင့် neurochemistry [99,100] ။ အခွားသောသုတေသနအခြို့သောအစာစားအစိုးရများလည်းကြွက်များတွင်အမျိုးအနွယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုပြသသည်။ ဥပမာ, ကအလွန်အရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင်လွှမ်းမိုးမှုအစားအစာဦးစားပေး, ဇီဝဖြစ်စဉ် dysregulations, ဦးနှောက်-ဆုလာဘ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အဝလွန်ခြင်းများအတွက်အန္တရာယ်မှသန္ဓေသားဘထိတွေ့မှုအတွက် [တွေ့ရှိရထားသည်99,101] ။ အစားအသောက်စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများ၏အကဲဖြတ်ဘို့က New Paradigm ဥပမာ, အရာတိုင်းတာအလုပ်ပြီ, compulsive အစားအစာစားသုံးမှုဆန္ဒရှိအခြေအနေအရ  ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြွက်များတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုလျော့ကျစေပါတယ်ထားတဲ့အချို့သောဆေးဝါးလျှောက်လွှာ, [အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစွဲတူသောစားသုံးမှုလျှော့ချရန်ကိုတွေ့ထားပြီ103].
အဆိုပါဝေါဟာရကိုစွဲထားပြီး 19th ရာစုအကုန်တွင်အစားအသောက်မှရည်ညွှန်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ 20th ရာစုအလယ်၌, ဟူသောဝေါဟာရကိုအစားအသောက်စွဲလမ်း laypersons ကြားတွင်ဒါပေမယ့်လည်းသိပ္ပံပညာရှင်များအကြားမသာ, အသုံးများခဲ့သည်။ (အားလုံးမှာလျှင်) သို့ရာတွင်ထိုသို့ညံ့ဖျင်းလည်းဖြစ်ခဲ့သည်သတ်မှတ်လျက်, ဝေါဟာရကိုမကြာခဏစိစစ်ခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုခဲ့သည်။ လူသားတွေအတွက်အစားအသောက်စွဲလမ်း၏အယူအဆအတည်ပြုရန်မှာရည်မှန်းပင်ကိုယ်မူလဆောင်းပါးများ 20th ရာစုအများစုဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းချို့တဲ့ခြင်း, မမှန်ခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအစာစားခြင်းတစ်ခုစွဲမော်ဒယ်ကိုပိုမိုပြင်းထန်စွာရာစုနှစ်၏အဆုံးအားဖြင့်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ အစားအသောက်စွဲလမ်းသုတေသနပေါင်းများစွာပါရာဒိုင်းဥပမာပါဝင်ပတ်သက်ရသောဆိုင်းသည်, 20th ရာစုအလယ်၌အဝလွန်အပေါ်တစ်ဦးအာရုံ, အ 1980s အတွက် AN နှင့် BN အပေါ်တစ်ဦးအာရုံ, အ 1990s အတွက်ချောကလက်အပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အိပ်ရာပေါ်မှာတစ်အာရုံခံယူခြင်းနှင့် - နောက်တဖန် - တိရိစ္ဆာန်နှင့် neuroimaging လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ရလဒ်များအလင်း၌ 2000s အတွက်အဝလွန်ခြင်း။
အစားအသောက်စွဲလမ်းအပေါ်သုတေသနပြုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိသိသာသာတိုးတကျခဲ့ပေမယ့်ထို့ကြောင့်, မကအသစ်တခု idea ကမအဝလွန်ခြင်း၏မြင့်တက်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုရှင်းပြဖို့ conceptualized ခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဆိုပါအစားအစာစွဲအယူအဆ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းနှင့်၎င်း၏သည် dynamically ပြောင်းလဲနေတဲ့သိပ္ပံနည်းကျ Paradigm နှင့်နည်းစနစ်၏အသိအမြင်တိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီများသည်ဤသမိုင်းအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ပါကအမှန်တကယ်အစားအသောက်စွဲကိုဆိုလိုကြောင့်ယူခံရဖို့ရှိသည်အရေးကြီးသောလာမယ့်ခြေလှမ်းများလာအောင်နှိုးဆွစေခြင်းငှါအဘယ်သို့သောအကြောင်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေရလွယ်ကူစေခြင်းငှါ၎င်း, အရှင်, သုတေသန၏ဤလယ်ပြင်၌တိုးတက်မှု [facilitated ပါလိမ့်မည်104].
ဥပမာအားဖြင့်, နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲအတွက်ပြန်လည်များစွာကို themes များပြီးသားအနည်းငယ်ဆယ်စုနှစ်အကြာဆွေးနွေးကြ၏။ ဤရွေ့ကား [ကျော်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးပါနှစ်ဦးစလုံးအခြေခံအနေနဲ့စွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ်ဥပမာ, လေ့လာမှုများပါဝင်သည်105,106] ဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်းအဖြစ် AN စဉ်းစား၏စိတ်ကူး [107,108] နှစ်ဦးစလုံးအကြောင်းအရာများအတွက် 1980s အဖြစ်အစောပိုင်းအဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ။ တစ်ခုစွဲအဖြစ် BN စဉ်းစား၏စိတ်ကူး  လည်းအများအပြားဆယ်စုနှစ်ပြန်စတငျရ။ ထို့ကြောင့်ကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစားနပ်ရိက္ခာစွဲများ၏အခြေအနေတွင်အဝလွန်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက် (ဥပမာ [ပေါ်လာသော13,110]) [သုတေသီများကြောင်းစွဲတူသောစားအဝလွန်ခြင်းမဟုတ်သလိုလုပ်နိုင်တဲ့အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမှကန့်သတ်တာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့ဖော်ပြထားအစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့်အတူပမာဏမှာတူညီခြင်းကိုဆင်ခြင်, အတန်ငယ်လှဲမှားသောပုံရသည်28,50].
နောက်ထပ်ထပ်တလဲလဲဆောင်ပုဒ်အစားအသောက်စွဲလမ်း၏တိုင်းတာခြင်းမဆိုင်ပါဘူးပုံရသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအစားအသောက်စွဲလမ်း Self-ဖော်ထုတ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည့်အတွက် 1990s အချို့လေ့လာမှုများရှိခဲ့သည်။ ဤကိစ္စကိုသူတို့ [YFAS နှင့် Self-ရိပ်မိအစားအသောက်စွဲလမ်းပေါ်တွင်အခြေခံအစားအသောက်စွဲခွဲခြားအကြားကြီးမားတဲ့မတိုက်ဆိုင်ရှိကွောငျးကိုပြသသောမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများမှာထပ်ဖွင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်111,112] အရှင်အစားအသောက်စွဲလမ်း၏တစ်ဦးချင်းစီ '' ကိုယ်ပိုင်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံ YFAS အားဖြင့်အဆိုပြုထားသောပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သုတေသီများသေးအစားအသောက်စွဲရောဂါလက္ခဏာများ၏တိကျသောအဓိပ္ပာယ်နှင့် ပတ်သက်. သဘောမတူဘူးပေမယ့် [84,113] ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော YFAS အဖြစ်စံချိန်စံညွှန်းမီအစီအမံ Over-ခွဲခြားအစားအသောက်စွဲလမ်း၏ကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းပေါ်လာသည်။ အဆိုပါ YFAS နောက်ကွယ်မှကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်, အမည်ရအစားအသောက်နှင့်စားရန်အ DSM ၏ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုစံဘာသာပြန်ဆို, ရိုးပေမဲ့သူကစွဲအကြောင်းကိုသည်အခြားသုတေသီများရှိသည်သောအဓိပ္ပာယ်မတူအဖြစ်ပြုလုပ်ကိုလည်း [ဝေဖန်ထားသည်93,98] ။ နှင့်အစားအစာစွဲဟာ YFAS သုံးပြီးထက်အခြားလူသားများတွင်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်လျှင်ထို့ကြောင့်အရေးပါသောအနာဂတ်ဦးတည်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အစားအသောက်စွဲလမ်းသုတေသနအစားအစာမှ DSM ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုစံ၏ဘာသာပြန်ချက်လမ်းညွှန်မှုနှင့်အနာဂတျမှာအစာစားပါလိမ့်မည်ဆိုလျှင်, အရေးပါသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုအစားအစာများအတွက် DSM ၏ပဉ္စမတည်းဖြတ်မူအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုများအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံအတွက်အပြောင်းအလဲကနေပျေါပေါကျထားတဲ့သက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လိမ့်မည် စွဲ  ။ ဥပမာအားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောစွဲစံ (အ DSM-5 ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း) လူ့စားအပြုအမူမှအညီအမျှသက်ဆိုင်သောရှိပါသလဲ မဟုတ်လျှင်ဤအစားအစာစွဲလမ်း၏အယူအဆချေဖျက်ရန်သနည်း?
အစားအသောက်စွဲလမ်း၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်တိုင်းတာခြင်းအကြောင်းကိုဤအခြေခံမေးခွန်းများကိုအပြင်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အခြားအရေးကြီးနည်းလမ်းပါဝင်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မထား: အစားအသောက်စွဲလမ်း၏အယူအဆဟာအဝလွန်ခြင်း၏ကုသမှုသို့မဟုတ်မူးရူးစားဘို့နှင့်အများပြည်သူမူဝါဒအချမှတ်ခြင်းအတွက်ဘယ်လိုသက်ဆိုင်ရာပါသလဲ အဲဒါကိုသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လျှင်, ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါတယ် [17,91]? အစားအသောက်စွဲလမ်း၏အယူအဆများ၏အားနည်းချက်များကို (ရှိပါက) [ဘာတွေလဲ115-119]? ဘယ်လိုစွဲတူသောစား၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကိုပိုပြီးတိတိကျကျလူသားတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထင်ဟပ်ဖို့တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ် ? addiction ကဲ့သို့နိုင်သလားစားအမှန်တကယ်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတ္ထုများရဲ့စွဲလမ်းသက်ရောက်မှုလျှော့ချရမည်သို့မဟုတ် "အစားအသောက်စွဲလမ်း" "အစာစားခြင်းစွဲလမ်း" ဖြင့်အစားထိုးသင့်ပါတယ် ?
အစားအသောက်စွဲလမ်းဆယ်စုနှစ်များအတွက်သိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသော်လည်းသင်တန်း, အဲဒါကိုသုတေသနတစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လယ်ပြင်ကိုတစ်ဦးအလွန်မြင့်မားအငြင်းပွားဖွယ်ရာများနှင့်အကြီးအကျယ်ငြင်းခုံခေါင်းစဉ်, ဖြစ်နေဆဲပင်။ ဤခေါင်းစဉ်တွင်သိပ္ပံနည်းကျ output ကိုလျှင်မြန်စွာနှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲအတွက်တိုးလာသို့ရာတွင်၎င်း၏စနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုက၎င်း၏နို့စို့အရွယ်ဆဲဖြစ်ပြီး, ထို့ကြောင့်ဤသုတေသနအားထုတ်မှုလာနှစ်များတွင်အများဆုံးဖွယ်ရှိတိုးမည်။
ရေးသားသူဥရောပသုတေသနကောင်စီ (ERC-StG-2014 639445 NewEat) ၏ထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံသည်။
OA Overeaters အမည်မသိ
Tarman V ကို, Werdell P. စားနပ်ရိက္ခာ Junkies: အစားအသောက်စွဲလမ်းအကြောင်းကိုအမှန်တရား။ တိုရွန်တို, ကနေဒါ: Dundurn; 2014 ။
Avena မိုင်, Talbott JR ။ ဘာလို့အစားအသောက်တွေပျက်သွားတာလဲ (သကြားကိုစွဲနေလို့) နယူးယောက် - Ten Speed ​​Press; ၂၀၁၄
Gearhardt AN, Davis ကနေ C, Kuschner R ကို, Brownell KD ။ hyperpalatable အစားအစာများ၏စွဲလမ်းအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ Curr မူးယစ်ဆေးဗျာ 2011 အလွဲသုံးစားပြုမှု; 4: 140-145 ။ [PubMed]
Krashes MJ, Kravitz AV စနစ်။ အစားအစာစွဲအယူအဆသို့ Optogenetic နှင့် chemogenetic ထိုးထွင်းသိမြင်။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2014; 8 (57): 1-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Brownell KD, ရွှေက MS ။ အစားအစာနှင့်စွဲ - ပြည့်စုံလက်စွဲစာအုပ်။ နယူးယောက် - အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်၊ ၂၀၁၂ p ။ xxii
Cocores ဂျာရွှေက MS ။ ဆားစားနပ်ရိက္ခာစွဲ Hypothesis ကျော်နှင့်အဝလွန်ခြင်းကပ်ရောဂါရှင်းပြပေမည်။ Med ယူဆချက်။ 2009; 73: 892-899 ။ [PubMed]
Shriner R ကို, ရွှေအမ်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ: တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေသော nonlinear သိပ္ပံ။ အာဟာရ။ 2014; 6: 5370-5391 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shriner RL ။ အစားအသောက်စွဲလမ်း: detox နှင့် abstinence reinterpreted? Exp Gerontol ။ 2013; 48: 1068-1074 ။ [PubMed]
Ifland JR, Preuss HG, Marcus MT, Rourk KM, တေလာ WC, Burau K. et al ။ သန့်စင်ပြီးအစားအသောက်စွဲလမ်း: တစ်ဂန္ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ။ Med ယူဆချက်။ 2009; 72: 518-526 ။ [PubMed]
Thornley S က, McRobbie H ကို, Eyles H ကို, Walker က N ကို, Simmons G. အထိုအဝလွန်ကပ်ရောဂါ: များသောအညွှန်းကိန်းတစ်ခုက hidden စွဲသော့ဖွင့်ဖို့သော့ခပါသလဲ Med ယူဆချက်။ 2008; 71: 709-714 ။ [PubMed]
Pelchat ML ။ လူသားတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ။ J ကို Nutr ။ 2009; 139: 620-622 ။ [PubMed]
Corsica ဂျာ Pelchat ML ။ အစားအသောက်စွဲလမ်း: စစ်မှန်တဲ့သို့မဟုတ်မှားယွင်းသော? Curr Opin Gastroenterol ။ 2010; 26 (2): 165-169 ။ [PubMed]
barry: D, Clarke က M, Petri မိုင်။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစှဲရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး: စွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခုပုံစံ overeating သလဲ? နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2009; 18: 439-451 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Tomasi: D, Baler RD ။ အဝလွန်ခြင်း၏စွဲလမ်း Dimensional ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 73: 811-818 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Tomasi: D, Baler RD ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစွဲ: neurobiological ထပ်နေ။ အဝလွန်ခြင်းဗျာ 2013; 14: 2-18 ။ [PubMed]
Davis ကနေ C, Carter က JC ။ အချို့သောအစားအစာများကိုစွဲလမ်းလျှင်, ဘယ်လိုဒီ compulsive ကျော်နှင့်အဝလွန်ခြင်း၏ကုသမှုကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ,? Curr စွဲကိုယ်စားလှယ် 2014; 1 ။ 89-95 ။
Lee ကမိုင်, Carter ကတစ်ဦး, Owen N ကို, ခန်းမ WD ။ ကျော်၏ neurobiology ။ Embo ကိုယ်စားလှယ် 2012; 13 ။ 785-790 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gearhardt AN, Bragg MA, ပုလဲ RL, Schvey NA, ရောဘတ်, CA, Brownell KD ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူမူဝါဒက။ Annu ဗြာ Clin Psychol ။ 2012; 8: 405-430 ။ [PubMed]
Gearhardt AN, Corbin WR, Brownell KD ။ စားနပ်ရိက္ခာစွဲ - မှီခိုမှုအတွက်ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း။ J ကိုစွဲ Med ။ 2009; 3: 1-7 ။ [PubMed]
Gearhardt AN, Grilo CM, Corbin WR, DiLeone RJ, Brownell KD, Potenza MN ။ အစားအသောက်စွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်မူဝါဒဂယက်ရိုက်။ စွဲလမ်း။ 2011; 106: 1208-1212 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Weiner B, Inebriety ၏အဖြူရောင်ဒဗလျူအဆိုပါဂျာနယ် (1876-1914): သမိုင်း, လိမ်း analysis နှင့်ဓာတ်ပုံပြပွဲပုံရိပ်တွေ။ စွဲလမ်း။ 2007; 102: 15-23 ။ [PubMed]
Clouston TS ။ အနာရောဂါစွဲမတရားသောနှင့်လေဖြတ်ထိန်းချုပ်မှု: dipsomania; morphinomania; chloralism; ကိုကင်း။ J ကို Inebr ။ 1890; 12: 203-245 ။
Wulff အမ် Uber einen interessanten oralen Symptomenkomplex und Seine Beziehungen ဇုရ Sucht ။ int Z ကို Psychoanal ။ 1932; 18: 281-302 ။
Thorner HA ။ compulsive စားတွင်။ J ကို Psychsom Res ။ 1970; 14: 321-325 ။ [PubMed]
Randolph TG ။ အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု၏ဖော်ပြရန် features တွေ: စှဲစားသောက်။ QJ လုံးအရက်။ 1956; 17: 198-224 ။ [PubMed]
Schulte EM, Avena မိုင်, Gearhardt AN ။ ဘယ်အစားအစာစွဲလမ်းနိုင်သနည်း အပြောင်းအလဲနဲ့အဆီအကြောင်းအရာနှင့်များသောဝန်များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ PLoS ONE ။ 2015; 10 (2): e0117959 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hinkle LE, Knowles HC, Fischer A, Stunkard AJ ။ ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူခက်ခဲလူနာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အခန်းကဏ္ - - panel ကိုဆွေးနွေးမှု။ ဆီးချိုရောဂါ။ 1959; 8: 371-378 ။ [PubMed]
Allison KC, Berkowitz RI က, Brownell KD, Foster GD, ဝါဒန်က TA ။ အဲလ်ဘတ်ဂျေ ( "ကို Mickey") Stunkard, MD အဝလွန်ခြင်း။ 2014; 22: 1937-1938 ။ [PubMed]
Stunkard AJ ။ ပုံစံများနှင့်အဝလွန်ခြင်းအစာစားခြင်း။ စိတ်ရောဂါဆိုးကျိုး 1959; 33: 284-295 ။ [PubMed]
Russell-Mayhew က S, ဗွန် Ranson KM, Masson PC ကို။ ဘယ်လို Overeaters အမည်မသိ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များကိုကူညီသလဲ, တစ်ဦးကအရည်အသွေးဆန်းစစ်။ EUR disorders ဗျာ 2010 စား; 18: 33-42 ။ [PubMed]
Weiner အက်စ်ကျော်၏စွဲ: ကုသမှုမော်ဒယ်များအဖြစ် Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုများ။ J ကို Clin Psychol ။ 1998; 54: 163-167 ။ [PubMed]
ခေါင်းလောင်း RG ။ အရက်စွဲဖို့လက်တွေ့တိမ်းညွတ်၏တစ်ဦးကနည်းလမ်း။ Med Assoc ဂျေ 1960 နိုင်သလား; 83: 1346-1352 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ခေါင်းလောင်း RG ။ အရက်စွဲအတွက်ခုခံကာကွယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်။ Med Assoc ဂျေ 1965 နိုင်သလား; 92: 228-231 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Clemis JD, Shambaugh GE ကဂျူနီယာ Derlacki EL ။ နာတာရှည်အတွင်းသို့ otitis မီဒီယာမှဆက်စပ်အဖြစ်နာတာရှည်အစားအသောက်စွဲလမ်းအတွက်ဆုတ်ခွာတုံ့ပြန်မှု။ အမ်း Otol Rhinol Laryngol ။ 1966; 75: 793-797 ။ [PubMed]
Swanson DW, Dinello အက်ဖ်အေ။ အဝလွန်မှုအတွက်ငတ်မွတ်နေတဲ့လူနာ-Up ကိုလိုက်နာပါ။ Psychosom Med ။ 1970; 32: 209-214 ။ [PubMed]
Scott DW ။ အရက်နှင့်အစားအစာအလွဲသုံးစားမှု: အချို့နှိုင်းယှဉ်။ br J ကိုစွဲလမ်း။ 1983; 78: 339-349 ။ [PubMed]
Szmukler GI, Tantam ဃ Anorexia nervosa: ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှီခို။ br J ကို Med Psychol ။ 1984; 57: 303-310 ။ [PubMed]
Marrazzi MA, Luby ED ။ နာတာရှည် anorexia nervosa တစ်ခု Auto-စွဲ opioid မော်ဒယ်။ lnt J ကို disorders စားပါ။ 1986; 5: 191-208 ။
Marrazzi MA, Mullingsbritton J ကို, Stack L ကို, လုပ်ပိုင်ခွင့်များ RJ, Lawhorn J ကို, ဂရေဟမ် V. et al ။ anorexia nervosa တစ်ခု Auto-စွဲ opioid မော်ဒယ်စပ်လျဉ်းကြွက်တွေမှာ Atypical endogenous opioid စနစ်များကို။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1990; 47: 1427-1435 ။ [PubMed]
ရွှေက MS, Sternbach HA ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်နှင့်အလေးချိန်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာနဲ့အတူ Endorphins ။ Integrated စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1984; 2: 203-207 ။
အဆိုပါအဝလွန်၌ပညာရှိဂျေနဲ့အတူ Endorphins နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်: အစားအသောက်စွဲလမ်းများအတွက်ယန္တရား။ J ကိုအဝလွန်ခြင်းအလေးချိန် Reg ။ 1981; 1: 165-181 ။
Raynes အီး, Auerbach ကို C, Botyanski NC ။ အရာဝတ္ထုကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အဝလွန်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အဘိဥာဏ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာလိုငွေပြမှု၏ level ။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 1989; 64 ။ 291-294 ။ [PubMed]
လီယွန်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Eckert ED, Teed: D, Buchwald အိပ်ချ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံတွင်အပြောင်းအလဲများနှင့်ကြီးမားသောအဝလွန်မှုအတွက်အူလမ်းကြောင်းရှောင်ကွင်းခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်အခြားအစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ။ J ကိုပြုမူနေ Med ။ 1979; 2: 39-55 ။ [PubMed]
လီယွန်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Kolotkin R ကို, Korgeski G. အ MacAndrew စွဲစကေးနှင့်အဝလွန်ခြင်း, anorexia နှင့်ဆေးလိပ်သောက်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သည်အခြား MMPI ဝိသေသလက္ခဏာများ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 1979; 4: 401-407 ။ [PubMed]
Feldman J ကို, bulimic လူနာ Eysenck အက်စ်ကိုစှဲကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ။ Pers Indiv ကွဲပြားမှု။ 1986; 7: 923-926 ။
ဆေးလ်ဗား P ကို, လာဖို့နဲ့ bulimic လူနာ Eysenck အက်စ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စွဲက de ။ Pers Indiv ကွဲပြားမှု။ 1987; 8: 749-751 ။
Hatsukami: D, Owen P ကို, Pyle R ကို, Mitchell ကဂျေအလားတူနှင့်အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုပြဿနာများနှင့်အတူ bulimia နှင့်အမျိုးသမီးနှင့်အတူအမြိုးသမီးမြားအကြား MMPI အပေါ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 1982; 7: 435-439 ။ [PubMed]
Kagan DM, Albertson LM ။ MacAndrew အချက်များအပေါ်ရမှတ်များ - Bulimics နှင့်အခြားစွဲလမ်းနေသောလူ ဦး ရေ။ Int J ကို Disord စားပါ။ 1986; 5: 1095-1101 ။
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအဖြစ် Slive တစ်ဦးက, Young ကအက်ဖ် Bulimia: မဟာဗျူဟာမြောက်ကုသမှုများအတွက်ဥပစာ။ J ကိုမဟာဗျူဟာ Syst Ther ။ 1986; 5: 71-84 ။
Stoltz စင်ကာပူဒေါ်လာ။ foodaholism မှပြန်လည်ထူထောင်။ J ကိုအထူး Group မှသူ Work ။ 1984; 9: 51-61 ။
မမှန်စား Vandereycken ဒဗလျူဒီစွဲလမ်းမော်ဒယ်: အချို့ဝေဖန်သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ကျမ်းကိုးစာရင်း။ int J ကို disorders စားပါ။ 1990; 9: 95-101 ။
Wilson က GT ကို။ မမှန်စားသုံးခြင်း၏စွဲမော်ဒယ်: တစ်ဝေဖန်ဆန်းစစ်။ Adv ပြုမူနေ Res Ther ။ 1991; 13: 27-72 ။
Wilson က GT ကို။ ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်စွဲအစာစားခြင်း။ မူးယစ်ဆေးဝါး Soc ။ 1999; 15: 87-101 ။
Kayloe JC ။ အစားအသောက်စွဲလမ်း။ Psychotherapy ။ 1993; 30: 269-275 ။
Davis ကနေ C, Claridge G. အဒီစွဲလမ်းအဖြစ်မမှန်စားသုံးခြင်း: တစ်ဦးက psychobiological ရှုထောင့်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 1998; 23: 463-475 ။ [PubMed]
Černý L ကို, Černý K. မုန်လာဥစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? မူးယစ်ဆေးမှီခိုတစ်ခုထူးခြားသောပုံစံ။ br J ကိုစွဲလမ်း။ 1992; 87: 1195-1197 ။ [PubMed]
Kaplan R. မုန်လာဥစွဲ။ Aust NZJ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996; 30: 698-700 ။ [PubMed]
Weingarten HP ကတစ်ကောလိပ်လူဦးရေအတွက် Elston ဃစားနပ်ရိက္ခာမတရားသော။ အစာစားချင်စိတ်။ 1991; 17: 167-175 ။ [PubMed]
Rozin P ကို, Levine, E, Stoess C. ချောကလက်တဏှာနှင့်ကြိုက်တယ်။ အစာစားချင်စိတ်။ 1991; 17: 199-212 ။ [PubMed]
Meule တစ်ဦးက, Gearhardt AN ။ အဆိုပါယေးလ်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုစကေး၏ငါးနှစ်: စတော့ရှယ်ယာယူပြီးရှေ့ဆက်ရွေ့လျား။ Curr စွဲကိုယ်စားလှယ် 2014; 1 ။ 193-205 ။
မက်စ်ခဤသည်နှင့်: ချောကလက်စွဲ, ကညွတ်စား၏ dual-pharmacogenetics နှင့်လွတ်လပ်ခွင့်၏ဂဏန်းသင်္ချာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 1989; 10: 390-393 ။ [PubMed]
Bruinsma K ကို Taren DL ။ ချောကလက်: အစားအစာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး? J ကို Am အစားအသောက် Assoc ။ 1999; 99: 1249-1256 ။ [PubMed]
ဒီစွဲလမ်းကနေပက် R. Recovery ကိုအမှန်တကယ်ချိုမြိန်ခဲ့သည်။ Med Assoc ဂျေ 1993 နိုင်သလား; 148: 1028-1032 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hetherington MM, Macdiarmid JI ။ "ချောကလက်စွဲ": ယင်း၏ဖော်ပြချက်များနှင့်ပြဿနာစားရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးပဏာမလေ့လာမှု။ အစာစားချင်စိတ်။ 1993; 21: 233-246 ။ [PubMed]
Macdiarmid JI, Hetherington MM ။ အစားအစာများကစိတ်ဓါတ်များမော်ဂျူ: 'ချောကလက်စွဲ' 'Br J ကို Clin Psychol အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေ၏ရှာဖွေရေးနှင့်မတရားသော။ 1995; 34: 129-138 ။ [PubMed]
ချိုမြိန်အစာ "စွဲ" ၏ Tuomisto T က, Hetherington MM, မောရစ် MF, Tuomisto MT, Turjanmaa V ကို, Lappalainen R. စိတ်ဓာတ်နှင့်ဇီဝကမ္မလက္ခဏာများ Int J ကို disorders စားပါ။ 1999; 25: 169-175 ။ [PubMed]
Rozin P ကို, Stoess C. စွဲဖြစ်လာမယ့်ယေဘုယျသဘောရှိပါသလား? စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 1993; 18: 81-87 ။ [PubMed]
Greenberg JL, Lewis က SE, Dodd DK ။ ကောလိပ်ကျောင်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားစွဲလမ်းနှင့် Self-လေးစားမှုထပ်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 1999; 24: 565-571 ။ [PubMed]
Trotzky AS ။ ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးအကြားစွဲလမ်းအဖြစ်မမှန်စားသုံးခြင်း၏ကုသမှု။ int J ကိုမြီးကောင်ပေါက် Med ကနျြးမာရေး။ 2002; 14: 269-274 ။ [PubMed]
ဝမ် GJ, Volkow ND, Logan J ကို, Pappas ရော်ဘာ, Wong ကမှန် CT, Zhu ဒဗလျူ et al ။ ဦးနှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2001; 357: 354-357 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, စွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်အာရုံခံဆားကစ်ထပ် Telang အက်ဖ်: စနစ်များကိုရောဂါဗေဒ၏သက်သေသာဓက။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc ခ 2008; 363: 3191-3200 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Volkow ND, ပညာရှိ RA ။ ဘယ်လိုမူးယစ်ဆေးစွဲကျွန်တော်တို့ကိုအဝလွန်ခြင်းကိုနားလည်ကူညီပေးနိုငျသနညျး နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 555-560 ။ [PubMed]
Schienle တစ်ဦးက, Schäferတစ်ဦးက, Hermann တစ်ဦးက, Vaitl ဃ Bing စားရောဂါ: အစားအစာ၏ပုံရိပ်များမှဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်ဦးနှောက်ကို Activation ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 65: 654-661 ။ [PubMed]
Pelchat ML, ဂျွန်ဆင်တစ်ဦး, ချမ်း R ကို, Valdez J ကို, Ragland JD ။ အလိုဆန္ဒ၏ပုံများ: fMRI စဉ်အတွင်းအစားအစာ-တဏှာ activation ။ Neuroimage ။ 2004; 23: 1486-1493 ။ [PubMed]
Avena မိုင်။ သကြားမှီခို၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်သုံးပြီးမူးရူးစား၏စွဲလမ်းကဲ့သို့ဂုဏ်သတ္တိများဆန်းစစ်ပါ။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2007; 15: 481-491 ။ [PubMed]
Avena မိုင်, Rada P ကို, Hoebel BG ။ သကြားနဲ့အဆီ Bing စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်ကွာခြားမှုရှိသည်။ J ကို Nutr ။ 2009; 139: 623-628 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cassin SE, ဗွန် Ranson KM ။ မူးရူးစားတစ်ခုစွဲအဖြစ်ကြုံတွေ့လား? အစာစားချင်စိတ်။ 2007; 49: 687-690 ။ [PubMed]
Gearhardt AN, Corbin WR, Brownell KD ။ အဆိုပါယေးလ်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုစကေး၏ပဏာမ validation ကို။ အစာစားချင်စိတ်။ 2009; 52: 430-436 ။ [PubMed]
American Psychiatric Association ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းကို manual ။ 4th ed ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: American Psychiatric Association; 1994 ။
Ziauddeen H ကို, Farooqi, ဖလက်ချာကို PC IS ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်: အစွဲမော်ဒယ်ဘယ်လိုယုံကြည်ပါသလဲ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2012; 13: 279-286 ။ [PubMed]
Gearhardt AN, White ကနေ MA, Masheb RM, Grilo CM ။ မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု setting တွင်မူးရူးစားရောဂါနှင့်အတူအဝလွန်လူနာတစ်ဦးလူမျိုးရေးအရကွဲပြားခြားနားနမူနာစားနပ်ရိက္ခာစွဲတစ်ခုစာမေးပွဲ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 54: 500-505 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gearhardt AN, White ကနေ MA, Masheb RM, မော်ဂန် PT, Crosby သည် RD, Grilo CM ။ မူးရူးစားရောဂါနှင့်အတူအဝလွန်လူနာအတွက်အစားအသောက်စွဲလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအနေနဲ့စာမေးပွဲ။ int J ကို disorders စားပါ။ 2012; 45: 657-663 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Davis က C. compulsive တစ်ခုစွဲလမ်းအပြုအမူအဖြစ် overeating: အစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့် Bing စား Disorder အကြားထပ်။ Curr အဝလွန်ခြင်းကိုယ်စားလှယ် 2013;2။ 171-178 ။
မလှူခြင်းနှင့်ပြင်းထန်မှု၏တစ်ဦးကရောင်စဉ်: passive ကျော် မှစ. "အစာစွဲ" ကို Davis က C. ။ ISRN အဝလွန်ခြင်း။ 2013; 2013 (435027): 1-20 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Avena မိုင်, Gearhardt AN, ရွှေက MS, ဝမ် GJ, Potenza MN ။ အကျဉ်းလြျှောပြီးနောက် bathwater နှင့်အတူကလေးထွက် Tossing? ကန့်သတ်ဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးအစားအသောက်စွဲလမ်းထှကျသှားစပွေီး၏အလားအလာအဆင်မပြေတာ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2012; 13: 514 ။ [PubMed]
Avena မင်, ရွှေက MS ။ အစားအစာနှင့်စွဲခြင်း - သကြားများ၊ အဆီများနှင့် hedonic overeating ။ စွဲ။ 2011; 106: 1214-1215 ။ [PubMed]
Gearhardt AN, Brownell KD ။ အစားအစာနှင့်စွဲဂိမ်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သလား? Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 73: 802-803 ။ [PubMed]
Ziauddeen H ကို, Farooqi, ဖလက်ချာကို PC IS ။ အစားအသောက်စွဲလမ်း: ကလေးဟာ bathwater အတွက်ရှိပါသလော နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2012; 13: 514 ။
Ziauddeen H ကို, ဖလက်ချာကို PC ။ အစားအသောက်စွဲလမ်းခိုင်လုံသောနှင့်အသုံးဝင်သော concept ကိုလား? အဝလွန်ခြင်းဗျာ 2013; 14: 19-28 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Benton ဃသကြားစွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစားသောက်ပုံမမှန်အတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ၏ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။ Clin Nutr ။ 2010; 29: 288-303 ။ [PubMed]
Wilson က GT ကို။ မမှန်, အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစွဲအစာစားခြင်း။ EUR disorders ဗျာ 2010 စား; 18: 341-351 ။ [PubMed]
ရော်ဂျာ PJ ။ အဝလွန်ခြင်းသည်အစားအစာစွဲလမ်းမှုလော။ စွဲ။ 2011; 106: 1213-1214 ။ [PubMed]
Blundell JE, Finlayson G. အစာစွဲလမ်းသည်မအထောက်အကူပါ။ hedonic အစိတ်အပိုင်း - သွယ်ဝိုက်လိုသော - အရေးကြီးသည်။ စွဲ။ 2011; 106: 1216-1218 ။ [PubMed]
Hebebrand J ကို, Albayrak အိုသွားလေ၏ R ကို, Antel J ကို, Dieguez ကို C, de Jong ကဂျေ et al ။ မဟုတ်ဘဲ "အစာစွဲလမ်း" စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူစားသုံးခြင်းပိုကောင်းဖမ်းယူနိုင်ခြင်းထက်, "စွဲစား" ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2014; 47: 295-306 ။ [PubMed]
Avena မိုင်, ရွှေဂျာ Kroll ကို C, ရွှေက MS ။ အစားအစာနှင့်စွဲလမ်း၏ neurobiology အတွက်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများ: အသိပ္ပံပညာ၏ပြည်နယ်အပေါ် update ကို။ အာဟာရ။ 2012; 28: 341-343 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tulloch AJ, Murray က S, Vaicekonyte R ကို, Avena မိုင်။ macronutrients မှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု: hedonic နှင့် homeostatic ယန္တရားများ။ Gastroenterology ။ 2015; 148: 1205-1218 ။ [PubMed]
Borengasser SJ, Kang P ကို, Faske J ကို, ဂိုမက်ဇ-Acevedo H ကို, ဘလက်ဘန်း ML, တဟာရှ TM အလိုအလျောက်။ et al ။ မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာနှင့်မိခင်အဝလွန်ခြင်းမှသန္ဓေသားဘထိတွေ့မှုအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ရစ်သမ် disrupts နှင့်ကြွက်သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်အသည်း၏ဇီဝဖြစ်စဉ် programming ကိုစေပါတယ်။ PLoS ONE ။ 2014;9(1): e84209 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Velázquez-Sanchez ကို C, Ferragud တစ်ဦးက, Moore က CF, Everitt BJ, Sabino V ကို, ဝါဂွမ်း P. အမြင့်ရို Impulse ကြွက်များတွင်အစားအသောက်စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2014; 39: 2463-2472 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bocarsly ME, Hoebel BG, သိပ်မရှိပါဘူး: D, ဗွန် Loga ငါ Murray သည် SM, ဝမ်အမ် et al ။ GS 455534 ရွေးချယ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမူးရူးစားသောက်ဖိနှိပ်ခြင်းနှင့်သကြား-bingeing ကြွက်များ၏ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန် attenuates ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2014; 25: 147-157 ။ [PubMed]
Schulte EM, Joyner MA, Potenza MN, Grilo CM, အစားအစာစွဲနှင့် ပတ်သက်. Gearhardt အေလက်ရှိထည့်သွင်းစဉ်းစား။ Curr Psychiat ကိုယ်စားလှယ် 2015; 17 (19): ။ 1-8 ။ [PubMed]
MR, Swencionis C. ကိုစှဲကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် bariatric ခွဲစိတ်ရှာကြံလူကြီးများအတွက် maladaptive စားအပြုအမူတွေဥပုသ်။ ပြုမူနေကိုစားကြလော့။ 2012; 13: 67-70 ။ [PubMed]
Davis က C. တစ်ဦးကမူးရူးစားခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်: ရာသီအလိုက်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များနှင့်အတူ shared အသင်းအဖွဲ့များ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013;4(183): 1-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Barbarich-Marsteller NC, Foltin RW, Walsh BT ။ anorexia nervosa တစ်ခုစွဲတူပါသလား Curr မူးယစ်ဆေးဗျာ 2011 အလွဲသုံးစားပြုမှု; 4: 197-200 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Speranza M က, Revah-Levy တစ် ဦး က, Giquel L ကို, Loas, G, Venisse JL, Jeammet P. et al ။ အစာစားခြင်းရောဂါအတွက် Goodman ၏စွဲစေသည့်ရောဂါဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအားစစ်ဆေးခြင်း။ Eur: Disorded Rev. 2012; 20: 182-189 ။ [PubMed]
Umberg မာခ်, Shader RI က, Hsu LK, Greenblatt DJ သမား။ bulimia nervosa အတွက် "အစာမူးယစ်": စွဲဖို့ disorders စားမှသည်။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2012; 32: 376-389 ။ [PubMed]
Grosshans M က, Loeber S က, အဝလွန်ခြင်း၏နားလည်မှုနှင့်ကုသရေးဦးတည်စွဲသုတေသနကနေ Kiefer အက်ဖ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2011; 16: 189-198 ။ [PubMed]
Hardman, CA, ရော်ဂျာ PJ, Dallas မြို့က R ကို, Scott J ကို, Ruddock ဟောင်ကောင်, ရော်ဘင်ဆင်အီး "အစားအသောက်စွဲလမ်းအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်" ။ Self-ရောဂါအစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့်စားအပြုအမူပေါ်မှာဤသတင်းစကားကိုထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အစာစားချင်စိတ်။ 2015; 91: 179-184 ။ [PubMed]
Meadows တစ်ဦးက, Higgs အက်စ်ငါထင်ထို့ကြောင့်ငါဖြစ်၏? Self-ရိပ်မိအစားအသောက်စွဲ၏ non-လက်တွေ့လူဦးရေရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ။ အစာစားချင်စိတ်။ 2013; 71: 482 ။
Meule တစ်ဦးက, Küblerအေအစားအစာ-related အပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ဥစ္စာမှီခိုစံ၏ဘာသာပြန်ချက်: ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;3(64): 1-2 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Meule တစ်ဦးက, Gearhardt AN ။ DSM-5 ၏အလင်း၌စားနပ်ရိက္ခာစွဲ။ အာဟာရ။ 2014; 6: 3653-3671 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
DePierre ဂျာ ​​Puhl RM, Luedicke ဂျေအသစ်ရဲ့သားကောင်ဝိသေသလက္ခဏာ? အခြားအ stigmatized ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့်အတူ "အစာစှဲလမျးသူ" တံဆိပ်၏နှိုင်းယှဉ်။ အခြေခံပညာ Apple က Soc psyche ။ 2013; 35: 10-21 ။
DePierre ဂျာ ​​Puhl RM, အစားအစာစွဲလမ်း၏ Luedicke ဂျေပြည်သူ့သဘောထားအမြင်: အရက်နှင့်ဆေးလိပ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်။ J ကို Subst အသုံးပြုခြင်း။ 2014; 19: 1-6 ။
Latner JD, Puhl RM, Murakami JM, O 'Brien KS ။ အဝလွန်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဒယ်အဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ။ အမည်းစက်, အပြစ်တင်နှင့်ရိပ်မိ psychopathology အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ အစာစားချင်စိတ်။ 2014; 77: 77-82 ။ [PubMed]
Lee ကမိုင်, ခန်းမ WD, Luck J ကို, Forlini ကို C, Carter ကအေစားနပ်ရိက္ခာစွဲနှင့်အလေးချိန်-based အမည်းစက်နှင့်အမေရိကန်နှင့်သြစတြေးလျအတွက်အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကုသမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။ အာဟာရ။ 2014; 6: 5312-5326 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lee ကမိုင်, Luck J ကို, ခန်းမ WD, Meurk ကို C, Boyle FM ရေ, အစားအစာစွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအပေါ် Carter ကအေပြည်သူ့အမြင်များ: မူဝါဒနှင့်ကုသမှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ PLoS ONE ။ 2013; 8 (9): e74836 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Avena မိုင်။ မူးရူးစား၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု၏လေ့လာမှု။ အစာစားချင်စိတ်။ 2010; 55: 734-737 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]